On khilaafka Bariga Dhexe - The World March
Bogga ugu weyn » Noticias » Qoraalada saxaafadda » On khilaafka Bariga Dhexe
MsGysV Latin America waxay muujineysaa murugo xaalada qalalaasaha laga dhex abuuray Falastiiniyiinta iyo Israel
Dunida Dagaal la'aan iyo Rabshad Laatiin Ameerika, noole ka tirsan New Universalist Humanist, oo ujeeddadiisu tahay inay gacan ka geystaan ​​joojinta dhammaan noocyada isku dhaca hubaysan, dagaallada, iyo guud ahaan sidii loo gaari lahaa adduun aan lahayn rabshad iyo takoor nooc kasta oo uu yahay, ayaa muujinaya aad uga xumahay xaaladda rabshadaha ka dhex qarxay Falastiiniyiinta iyo Israa’iiliyiinta, oo durba sheegata in ka badan laba boqol oo dhimasho. Waxay sidoo kale muujineysaa midnimadeeda dhibbanayaasha dhimashada ee dhacdooyinkan, kuwa dhaawacmay, iyo qoysaska dhammaantood, Falastiiniyiinta iyo Israa’iilba.
Ururkan bani'aadamnimada wuxuu si adag u adkeysanayaa in aysan jirin wax qiil u siinaya xaalad rabshado sida tan ka dhacda aagga iyo in aysan jirin wax ka muhiimsan nolosha aadanaha iyo xuquuqdiisa, iyadoon loo eegeyn jinsiyad, jinsi, jinsi, caqiido diimeed ama fikrad siyaasadeed.
Dhimashada waxaa ku jira dumar iyo caruur fara badan, taas oo ka dhigeysa xaalada bini'aadanimo ee nasiib darada ah ee ka socota gobolka mid aad u daran oo ah mida isaga ku riixeysa inuu si qoto dheer u sheego hadalkaan isagoo cambaareynaya dhacdooyinkan musiibada ah ee ay tahay inuu dhammaado si deg deg ah looga hortago geerida dhimashada dadka rayidka ah ee aan waxba galabsan.
Dunida dagaal la'aan iyo rabshad la'aan Latin America waxay ku boorineysaa Golaha Amniga ee Qaramada Midoobay inay tallaabo ka qaadaan arrintana joojiyaan dambiyada ka dhanka ah aadanaha ee ka dhacaya kuna ciqaabaan Maxkamadda Caalamiga ah ee Dambiyada iska horimaadyadan ay inta badan saameeyeen dadka rayidka ah. Waa wax aan la aqbali karin in bulshada caalamku ay qayb ka noqoto xasuuqaas oo ay markale ku fashilanto kaalinteeda ilaalinta nabada iyo amniga shucuubta adduunka.
Waxay sidoo kale ugu baaqeysaa damiirka aadanaha ee dhinacyada dagaallamaya inay joojiyaan sii kordheynta rabshadaha oo cawaaqib xumo ku leh dadka reer Falastiin iyo Israa’iilba, taasina waxay ka sii adkaan kartaa xilliyadii ugu xumaa ee soo maray 2014.
Wuxuu ku adkaysanayaa in sida kaliya ee lagu soo afjari karo rabshadahaan soo noqnoqday ay tahay in Israa'iil ay joojiso qabsashada sharci darada ah ee Falastiin. Tani waa asalka khilaafaadka oo dhan, oo ay doorbidayso aragtida dagaal ee wadamada ka ciyaara ganacsiga hubka, iyo kuwa kale, Mareykanka Beesha Caalamku waa inaysan ku lug lahaan weeraradan. Waxay ku saabsan tahay difaaca xuquuqda aadanaha ee aasaasiga ah ee dadweynaha xagjirka ah iyo weerarada joogtada ah.
Dhulalka ay Israel qabsatay ee ah degsiimooyinka sharci darrada ah ee ay diiday UN-ka waa in la farageliyaa oo la xakameeyaa si cadaawadda, cunsuriyadda iyo dhammaan noocyada kala sooc ee labada dhinac u joogsadaan Sidoo kale in laga takhaluso barakaca qasabka ah, midab kala sooca midab takoorka iyo nooc kasta oo muujinta sareynta ah oo ay reer binu Israa’iil kaga soo horjeedaan dadka reer Falastiin, oo inta badan loo arko qaxooti dalkooda ku nool.
Si la mid ah, waxay cambaareyneysaa ficilada dhaqdhaqaaqa Falastiiniyiinta iska caabinta Islaamiga ah ee Xamaas ee ka dhanka ah Israa'iil, maadaama aysan jirin nooc ka mid ah rabshadaha hubeysan ee qiil loo helayo si kastoo ay tahayba Ururada caalamiga ah ee xuquuqul insaanka waa inay dhaqan galiyaan heshiiskii afaraad ee Geneva iyo Baaqa Caalamiga ee Xuquuqda Aadanaha. Intaas waxaa sii dheer, labada shacab waa inay ku dhawaaqaan xabad joojin labada dhinac ah, u fadhiistaan ​​si ay uga wada hadlaan xal aan rabshad lahayn oo looga baxo dhibaatadan, ayna ka shaqeeyaan sidii loo gaari lahaa heshiis rasmi ah oo soo afjaraya halganka dhiiga badan ku daatay ee u dhexeeya laba qaran oo walaalo ah.
Dunida Dagaal la'aan iyo Rabshado Laatiin Ameerika waxay ku boorineysaa dhammaan ururada bulshada rayidka ah ee adduunka oo dhan ee ka shaqeeya xuquuqda aadanaha, nabadeynta iyo dhaqdhaqaaqyada ka soo horjeedka dagaalka inay sameeyaan sabab guud isla markaana ay si firfircoon u cambaareeyaan dhacdooyinkan laga qoomamoodo ee wax u dhimaya xuquuqda aadanaha ee nolosha, badbaadada shaqsiga iyo ku noolaanshaha jawi ka caagan rabshadaha sida ku xusan Axdiga Qaramada Midoobay oo qof walba balan qaaday inuu ixtiraamayo.
Ugu dambeyntiina, waxay ugu baaqeysaa dhammaan dadka damiirka leh ee adduunkan, taliyayaasha, xildhibaannada, barayaasha, hoggaamiyeyaasha diinta ee diimaha oo dhan, siyaasiyiinta dhammaan fikradaha, ardayda heerar kasta oo ay yihiin, inay naftooda u huraan inay u hoggaansamaan arrintan. in si rasmi ah loo joojiyo aafada dagaalada, taas oo xitaa kunkan kun ee cusubi sii ahaanayaan ceebtii ugu weyneyd ee taariikhda aadamaha, taas oo u horseeday dhib aad u fara badan aadanaha.
Saxiixayaasha: Dunida dagaal la'aan Chile, Dunida dagaal la'aan Argentina, Dunida dagaal la'aan Peru, Dunida dagaalla'aan Ecuador, Dunida dagaal la'aan Colombia, Dunida dagaal la'aan Panama, Dunida dagaal la'aan Costa Rica, Dunida dagaal la'aan Honduras
Waxaan uga mahadcelinaynaa Wakaaladda Caalamiga ah ee Pressenza qoraalka maqaalka la daabacay: Oo Ku Saabsan Colaada Bariga Dhexe.
1 faallo ku saabsan "Ku saabsan khilaafka Bariga Dhexe"
Pingback: Ku saabsan khilaafka Bariga Dhexe - Latam Legal